Akụkọ - Ihe ị ga-a attentiona ntị na ya mgbe ị na-etinye gasket isi
1. Enweghi ike
Roba roba nwere ike ịgbanwe ọdịdị ya dịka mmiri mmiri. N'ezie, ọ gaghị asọpụta. Mgbe ike ịpịpịa nke na-eme ka nrụrụ ya kwụsị, ọ nwere ike ịlaghachi n'ụdị mbụ ya (ya bụ, olu nke gasketị anaghị agbanwe n'oge usoro mkpakọ. Gbanwee, nke gosipụtara ịdị ukwuu nke mgbanwe mgbali).
kwesiri inwe ike zuru oke iji nagide ike nke na-eme ka ọ banye na steeti a kara akara ma nagide usoro mmiri dị elu (ya bụ, ihe anụ ahụ nke roba dịka ike mgbatị na ike mgbagha).
Site na ịhazi usoro ahụ, ọ nwere ike ọ bụghị naanị nweta ike zuru oke maka ojiji, mana enwekwa plastik zuru ezu, nke mere na ọ nwere ike jikọta ya na elu igwe ahụ n'okpuru nrụgide kwesịrị ekwesị, si otú a na-arụ ọrụ ọrụ akara (ụdị gasket na efere akara. na grooves bụ agbanwe agbanwe).
4. ịbanye na-eguzogide
Networkdị ntanetị polymer dị iche iche nke roba roba nwere ike iguzogide mmiri nke mmiri mmiri dị iche iche (nkwụsị mgbasa ozi).
5. nguzogide ogo
Rọba na ihe polymer nwere ọghọm, ya bụ, ọ ga - eme ka ihe roba roba niile bụrụ nke dabara adaba maka ọnọdụ okpomọkụ dị oke warara na usoro nke iguzogide okpomọkụ. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa iji nlezianya họrọ usoro ihe eji eme ihe dịka ọnọdụ okpomọkụ achọrọ maka ojiji. .
Ọtụtụ ihe eji emepụta sịntetị ọhụrụ nwere njirimara ogologo ndụ ọrụ ma e jiri ya tụnyere ụdị ihe ochie. Nke a bụ n'ihi iji ihe mgbakwunye ọhụrụ iji gbatịkwuo ndụ ọrụ ahụ. Na nke a, nhọrọ ziri ezi nke ihe eji emepụta sịntetik dị ezigbo mkpa. Ihe niile nwere ike ịdabere na roba ga-enweta ahụ erughị ala izu ike. N'oge ojiji, n'ihi mgbanwe nke kemịkal n'ime ihe sịntetik, ọrụ akara mbụ ga-eji nke nta nke nta belata, na mgbe ọrụ akara ahụ dị ala Ọ dịkarịa ala, a na-apụghị izere ezere.
Yantai Ishikawa Sealing Technology Co., Ltd. bụ ọkachamara na mmepụta na ịrụ ọrụ nke akara akara dị iche iche, gasket gas, gaskets, na ọta ọkụ. Ọ bụ onye osote onye isi oche nke China Striction and Sealing Materials Association yana onye isi oche nke Multi-cylinder Small Diesel Engine Council nke Internal Combustion Engine Association. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ kachasị ukwuu ọkachamara na mmepụta nke ngwaahịa akara.